QM: Waxaan kaalmo caafimaad garsiinay Puntland - BBC News Somali
Image caption Qalab caafimaad
Iyadoo ka jawaabeysa dhibaatooyinka bani'aadminimo ee ka dhashay abaaraha ka taagan Soomaaliya ayaa sanduuqa dadweynaha ee UN waxaa uu sheegay in ay kaalmo siin doonaan hooyada iyo dhalaanka ku nool degaanada Puntland oo ay abaartu ku habsatay.
Kaalmadan oo ka kooban dawooyin iyo qalab kale ayaa waxay he'yadu sheegtay in ay ka faaideysan doonaan 20 kun oo haweenka xaamilada.
Waxaana qalabkani la geyn doonaa sideed xarumood oo ku kala yaala magaalooyinka Bosaaso iyo Garowe kuwaa oo laga bixin doono adeegyo caafimaad oo asaasi ah sidoo kalena wax ka qaban doonaa xaaladaha adag.
kaalmada ayaa lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka ee Puntland.
Sanduuqa dadweynaha ee UN waxaa uu sheegay in Soomaaliya guud ahaan ku dhawaad 6.2 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani'aadminimo, halka 3.3 milyan oo qof na ay tahay in la gaarsiiyo adeeg caafimaad oo deg deg ah.
Hey'addu waxay intaa ku dartay in 22kii hooyo ee uur leh ee ilmaha lagu qalo ay midi dhimato xilliga uurka ama foosha.